Ayibonwa eyeVodacom nonyaka | Isolezwe
Ayibonwa eyeVodacom nonyaka
Isolezwe / 19 June 2012, 12:22pm /
IMENENJA yeKaizer Chiefs uBobby Motaung ayikhathazekile ngokuhoxiswa kweVodacom Challenge yalo nyaka njengoba sekuvelile ukuthi ngeke ube khona lo mqhudelwano odlalwa yizinkunzi zaseSoweto namaqembu asuke emenyiwe angaphandle kwelakuleli.
Yize abakwaSAIL okuyinkampani ephethe umqhudelwano bethe akukho abazokutshela abezindaba ngalo mqhudelwano kodwa amaqembu akuleli athintekayo izolo akuvumile ukuthi asetsheliwe ukuthi ngeke ube khona.
Kuzoba ngokokuqala eminyakeni engu-13 ingabi khona iVodacom Challenge. Lo mqhudelwano unikeza iChiefs nezimbangi zayo i-Orlando Pirates ithuba lokuvivinya abadlali ngaphambi kokuqala kwesizini entsha. Abalandeli bala maqembu bebehlezi bewulangazelele lo mqhudelwano ukubona ukuthi amaqembu abo athenge kanjani.
“Engikwaziyo wukuthi iVodacom Challenge ngeke idlale kulo nyaka. Anginayo imininingwane, iSAIL iyona ezokhipha isitatimende esinemininingwane ngezizathu zokuhoxiswa komqhudelwano,” kusho uMotaung.
Ebuzwa ukuthi ngabe lezi zindaba ngeke yini zidunge izinhlelo zomqeqeshi uStuart Baxter zokulungiselela isizini entsha uthe: “Thina njengabantu abathintekayo siyaziqonda izizathu zokungabi khona komqhudelwano. Ngeke siphazamiseke ngoba sinazo ezinye izinhlelo.”
Okhulumela iPirates, uMickey Modisane, naye ukuqinisekisile ukuthi abalandeli bazoyizwa ngendaba iVodacom Challenge kulo nyaka.
“Akukho esisakutholile okubhalwe phansi okubeka izizathu ngokuhoxa kwayo kodwa sesazisiwe ukuthi ayikho. ISAIL iyona engabeka izizathu ezinqala ngokuhoxiswa kwayo,” usho kanje.
Uthe lo mqhudelwano ubuyingxenye enkulu yamalungiselelo amaqembu ukuzihlola ngaphambi kwesizini entsha.
Uthe: “Ayikho into esingayenza, kufanele silandele imigomo kodwa abalandeli bethu abangakhathezeki ngoba bazokwazi ukubona izihlabani zabo kuCarling Black Label Cup (ngoJulayi 28) futhi kukhona eminye imidlalo esizama ukuyihlanganisa.”
Izolo umqondisi wakwaSAIL, uJabu Mathibela, ubesamile ekutheni akukho abazokusho, bazokhipha isitatimende uma sebekulungele ukwenza njalo.
Yize uMathibela engafuni ukukhuluma kodwa iphephandaba elinguzakwabo kwaleli, iThe Mercury, ngesonto eledlule libike ukuthi iTheku lihoxile ukusingatha lo mqhudelwano obuzolidla u-R3.5 million.
Isizathu esivelile wukuthi iNewcastle United edlala ku-English Premiership neTP Mazembe yaseDR Congo abasayinanga izivumelwano ngesikhathi.
AbakwaVodacom nabo bakhomba iSAIL ukuthi iyona ezocacisa konke.